Nahoana no Interphase no dingana lava indrindra amin'ny tsingerin'ny sela
Interphase no dingana lava indrindra amin'ny tsingerin'ny sela. Mandritra io vanim-potoana io, ny sela dia mitombo amin'ny habeny ambony indrindra, manao ny asany ara-dalàna amin'ny sela, mamerina ny ADN ary miomana amin'izany.
Nahoana no mikorontana ny tsingerin'ny torimasoko
Mety hanelingelina ny fandaharam-potoan'ny torimasonao ny asa fifindra-monina, ny alina manontolo, ary ny jet lag. Soa ihany fa ny fampiharana ny fahadiovan'ny torimaso tsara dia afaka mamerina anao amin'ny làlana. Alohan'ny hatoriana, ialao ny jiro mamirapiratra sy mavesatra
Fanontaniana: Nahoana no fohy kokoa ny tsingerin'ny sela ao amin'ny sela epithelial
Ny tsingerin'ny sela dia fohy kokoa amin'ny sela epithelial raha oharina amin'ny karazana sela hafa satria simba tsy tapaka ny sela / tavy. Nahoana no mizara haingana ny sela epithelial? Ity toerana ambony ity
Fanontaniana: Nahoana no tsy tsingerina sedimentary ny tsingerin'ny azota
>Safidy A sy C: Ny singa toy ny karbôna sy ny azota dia anisan'ny tsingerin'ny gazy fa tsy ny tsingerin'ny sedimentary. Ny tsingerina sedimenta manana singa kely misy gazy dia hita ao anaty solifara
Fanontaniana: Mihodina mangina ve ny Cci amin'ny 10 22
Hihodina semi auto ve ny CCI? CCI® Quiet-22™ Semi-Auto dia mampihena be ny habetsaky ny 22 LR boribory mahazatra, raha mandeha bisikileta tsy misy kilema amin'ny alalan'ny basy semi-automatique sy basy. Ny marina, ambany-velocity